१२७५.९८ विन्दुमा नेप्से, नेप्से परिसूचक बढे पनि घट्यो कारोबार रकम | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण १२७५.९८ विन्दुमा नेप्से, नेप्से परिसूचक बढे पनि घट्यो कारोबार रकम
on: June 11, 2019 नेप्से विश्लेषण, लगानी, समाचार
जेठ २८, काठमाडौं(अस) । मंगलवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव १७ अंक बढेर बन्द भएको छ । गत साताको पहिलो कारोबार दिन देखि निरन्तर घटेको नेप्से शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत बढेर १ हजार २७५ दशमलव ९८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो ।
नेप्से परिसूचक बढे पनि यस दिनको कारोबार भने कम छ । यस दिनको कारोबारमा १ हजार २७६ दशमलव २६ विन्दुबाट शुरु भएको नेप्से परिसूचक पहिलो एक घण्टाको कारोबार अवधिसम्म बढेर १ हजार २८१ दशमलव ३२ विन्दुसम्म पुगेको थियो । सो विन्दु पश्चात घटेर १ हजार २७४ दशमलव ८५ विन्दुसम्म पुगेको परिसूचक घटबढ हुदैं अन्त्यमा १ हजार २७५ दशमलव ९८ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
गत साता देखि ओरालो लागेको बजार मंगलवार बढेर बन्द हुदाँ कारोबारमा आएका १२ समूह मध्ये ६ समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी ६ ओटा समूहको परिसूचक घटेको छ । वाणिज्य समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै व्यापार समूहको परिसूचक ३ दशमलव १४ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी शून्य दशलमव ८८ प्रतिशत घटेको छ ।
मंगलवार रू. ४८ करोड ८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनका कारोबार रकम अघिल्लो दिनको कारोबारको तुलनामा २१ दशमलव २१ प्रतिशत कम हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव ४० अंक बढेर २७२ दशमलव ८६ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
१२ समूहको परिसूचक, कुनको बढ्यो कुनको घट्यो ?
यस दिन भरिको कारोबारमा आएका १७४ कम्पनीमा ७१ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ७४ कम्पनी शेयर मूल्य भने घटेको छ । त्यस्तै, २९ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । पाँचथर पावर कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ५२ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १२ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. १३८ मा कारोबार भएको छ ।
यस्तै खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव २३ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा रू. ६ ले बृद्धि भई अन्तिम शेयर कारोबार प्रतिकित्ता रू. ७१ मा खरीद विक्री भएको छ । यी दुई कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
साथै, नेपाल हाइड्रोको शेयरमूल्य यस दिनको कारोबारमा ९ दशमलव ६१ प्रतिशत घटेर अन्तिम शेयरमूल्य रू. १४१ मा खरीद विक्री भएको छ । कारोबार अवधिभर नेपाल हाइड्रोको शेयरमूल्य रू. १५ घटेर नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १४१ मा सिमित भएको छ । यस्तै वल्र्ड मर्चेन्ट बैकिङ्गको शेयरमूल्य ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत घटेको छ ।
मंगलवारको कारोबारमा शिवम् सिमेन्ट्सको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६६७ मा रू. ३ करोड ७८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
साथै, एनआईसी एशिया बैंकको प्रतिकित्ता रू. ४५७ मा रू. २ करोड ७४ लाख र कृषि विकास बैंकको अन्तिम शेयर प्रतिकित्ता रू. ४१६ मा खरीद विक्री भई रू. २ करोड ५९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।